गरिमाको प्रधान कार्यालय राजधानीमा स्थानान्तरण, चाबहिलमा थप शाखा
पोखरालाई आधार बनाएर वित्तीय सेवा प्रदानगर्दै आएको गरिमा विकास बैंकले राजधानीको लाजिम्पाटमा प्रधान कार्यालय स्थानान्तरण गरेको छ। एक कार्यक्रमकाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले प्रधान कार्यालयको उद्घाटन गरे।
सो अवसरमा गर्भनर डा. नेपालले अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा जोड दिने बताए। कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले सेवाग्राहीलाई उत्कृट वित्तीय सेवा सहज रुपमा दिन बैंकले कुनै कन्जुस्याई नगर्ने बताए।
पोखराबाट लाजिम्पाटमा आफ्नो मुख्य कार्यालय स्थानान्तरणको सबै प्रकृया पुरा गरी गत चैत २७ देखि बैंकले अनौपचारिक रुपमा सेवा सुरु गरेको थियो।
आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को यस अवधिसम्म बैंकले १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन तथा १२ अर्ब ९० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ।
केही समय अघिमात्रै १० बराबर ७ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको बैंकको हालको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १६ करोड छ।
यसैबीच बैंकले शुक्रबार नै चाबहिलमा आफ्नो शाखा समेत बिस्तार गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेलले चाबहिल शाखाको उद्घाटन गरेका थिए। चावहिल, सामाखुसी, लाजिम्पाट तथा कलंकी सहित देशभर ४७ शाखा र ९ वटा एटीएमबाट बैंकले वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २३, २०७४, ०६:२७:०३